ဂေဇက်ရွာက ဗိုက်ကလေးတို့မိုးရွာရေးစွမ်းဆောင်ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂေဇက်ရွာက ဗိုက်ကလေးတို့မိုးရွာရေးစွမ်းဆောင်ချက်
Posted by ဇောက် ထိုး on May 31, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
တနေ့… ဂေဇက်ရွာထဲမှာ ဒန်အိုးဒန်ခွက်များ လှည့်လည်ရောင်းလာတဲ့ အထမ်းတောင်းကြီးနဲ့ ဈေးသည် ဘကြီးမိုးကြီး …ဂေဇက်ရွာရဲ့ ရွာလည်မန်ကျည်းပင်ကြီးအောက်က ကွပ်ပျစ်မှာ အမောဖြေနေခိုက်…..
ဂေဇက်ရွာရဲ့ နာမည်ကျော် ကိုဗိုက်ကလေး….ရွာထဲက ကာလသားတွေ တစု တဝေးနဲ့ မန်ကျည်းပင်ကြီးအောက် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
“ ဟဲ့…ဗိုက်ကလေးတို့ ဘာလုပ်ကြမလို့လဲ…အဖွဲ့တောင့်လှပါလား”
“နေကပူ…မိုးကမရွာနဲ့ဆိုတော့ မိုးရွာအောင် ကျွန်တော်တို့ရွာက အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ လွန်ဆွဲပွဲကျင်းပကြမလို့ဘကြီးမိုး”
“ဟေ….လွန်ဆွဲရင် မိုးကရွာသလား……… အေး…လူကြီးတွေက လူငယ်တွေ ကို လက်ဆင့်ကမ်းအမွေတွေ ပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှားယွင်းတဲ့ အမွေတွေ ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မပေးတာကမှ ကောင်းဦးမယ်နော်။
စည်းလုံးညီညွတ်ရေး…မြန်မာ့ အားကစား မတိမ်ကော မပပျောက်ရေး..ပြည်သူတွေ ပျော်ရွင်ရေး စတဲ့ ကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လွန်ဆွဲပွဲ ကျင်းပကြတယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
မိုးတွေခေါင်လို့ မိုးရွာအောင် လွန်ဆွဲရတယ်ဆိုတဲ့ အသိမှားတွေ…မှားယွင်းပြီး ယုတ္တိမကျ…ဆက်စပ်မရတဲ့ အယူအဆမှား အမွေတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ ကြမယ်ဆိုရင်……
နှောင်းခေတ်လူငယ်တွေက ယနေ့ခေတ်လူတွေကို အထင်သေးစရာ အမြင်သေးစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြမယ်နော်။
ဟိုတုန်းက လူတွေ..အတော်နောက်တယ်ကွာ….မိုးရွာအောင် လွန်ဆွဲခဲ့ကြသတဲ့….သူတို့ မိုးဘာကြောင့်မရွာတာလဲ…မိုးခေါင်ရခြင်းအကြောင်းတွေကို သိမသွားကြဘူးနော်လို့
တကယ်တော့ ခုလို ရာသီဥတုတွေ မဖောက်ပြန်အောင် မိုးတွေကောင်းအောင်က လွန်ဆွဲကြရမှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ သစ်ပင်တွေ စိုက်တာက ပိုသဘာဝ ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အဲ….မိုးမရွာသေးလို့ မိုးမျှော်နေသူတွေ စိတ်သက်သာအောင် အပျင်းပြေအောင် ….တောင်သူတွေ မိုးဦးမကျသေးတော့ အားနေတုန်း ပျော်ရွင်အောင်ဆိုရင်တော့လဲ ကောင်းပါတယ်။ လုပ်ရပ်ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး မောင်ဗိုက်ရယ်။ ဘကြီးမိုးက အသိ..ကိုပြောတာပါ။”
“ဟုတ်ကဲ့ ဘကြီးမိုး…လူတွေမိုးမရွာလို့စိတ်ညစ်တာ သက်သာတာပေါ့ဗျာ…”
“ဒါနဲ့ မိုးရွာအောင် တချို့ရွာတွေမှာတော့ ငရံ့မင်းပရိတ်ရွတ်ကြပါတယ်..မင်းတို့အဲဒါမရွတ်ကြ ဘူးလား…..’
ကျနော် တစ်ကယ်ပဲ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေဒါ
လွန်ဆွဲရင် မိုးရွာသလား မရွာဘူးလားဆိုတာကိုလေ..
တလောက မန်းလေးမှာ လွန်ဆွဲတယ် ကြားတယ်ဗျ..
ရန်ဂုန်မှာတော့ ဆွဲသံ မကြားမိပါဘူး.ဒါပေမဲ့ ရွာနေပြီလေ..
လူတွေလဲ ရေခံလို့ ရ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းတော့ အထိုက်အလျောက်ဖြစ်သွားပါတယ်..
တော်တော်ပူလွန်းလို့ မခံနိုင်ဘူး ကိုကိုဇောက်ရာ..
ကျောက်သထေးအူးပေတို့ လို ဆောင်းပရုဖ်ဂျင်နရေတာ မရှိ..ရေကူးကန်မရှိ ဘီယာအေးအေးလေးမရှိတဲ့ ဘ၀မိုလို့ 
သဘာဝရဲ့ အလကားစည်းစိမ်လေးတွေနဲ့ ပဲ ပျော်နေရသူပါ ဘာကြီးဇောက်ရာ..အဲလေ..ဘကြီးမိုးရာ..
ငရံ့ မင်းလဲ မကယ်နိုင်ရှာတော့ဘူး ထင်ပါရဲ
လွန်ဆွဲကောင်းလို့ ကြိုးဈေးတွေလဲ တက်နေလောက်ပါပြီ
ချစ်မိုး…. ဘယ်တော့ ရွာမှာရဲ;;;;;
မသိပါဘူးဗျာ အူးဗိုက် ကြွားကြွားနေလို့ ကိုပေ့ဘဝအညာကျသဗျ။
ဘီယာ ကပ်သောက်မလို့ ။ဟီးးးးးးးး
မိုးလဲရွာပီ၊လေတွေထ၏။အပင်ကျိုးလို့ မီးကြိုးပြတ်၊မီးခဏ ခဏဖတ်
ဒန် တန် တန့် 
မန္တလေးမှာ လွန်ဆွဲတော့ ရွာသတဲ့လား…ရန်ကုန်မှာကြတော့ မဆွဲပဲ ဘာကြောင့်ရွာတာလဲ….မီးစက်ကြီးမောင်း…ရေခဲသေတ္တာထဲက ဘီယာ အေးအေးလေးသောက်နေရတိုင်း အေးနေတယ်လို့ ထင်သလား။ ဆီဖိုးတွေကုန်ပါပြီ….ဘီယာဖိုးက ဘယ်လောက်ထွက်သွားပြီ…ဆိုပြီးပူနေ ရင်ဘယ်နှယ်လုပ်ပါ့။ ပြီးတော့ ဗိုက်ကလေး နာ့အိမ်လာပြီး ဘီယာအေးလေး တောင်းရင်… ဘယ်နှယ်လုပ်ပါ့။
၇=ထပ်တိုက်ပေါ် တိုက်ပြီး မုန့်ဆီကြော် ကြော်စားတဲ့သူဋ္ဌေး…. စိတ်ချမ်းသာရဲ့တဲ့လား….
မို့ခေါင်နေယင် လူတွေကဖားဖိုဖားမ မိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်
ဟာဗျာ ..ဒီလူတွေ ဖားမပါပါနဲ့ ပြောလည်း မရ၀ူး ..
တဆိတ်ရှိ ဖားပဲ …ရမယ်ရှာနေတော့တာဘဲ…
ကျွန်တော်လဲ မနှစ်လောက်က ဘယ်နိုင်ငံလဲ မသိဘူး။ ဖားဖိုနဲ့ဖားမ ကိုလိမ်းချယ်ပြီးတော့ကို မင်္ဂလာဆောင်ပေးနေတဲ့ သတင်းတွေ့တယ်ဗျို့….ပုံတွေလဲ မြင်လိုက်ရတယ်။
ကဲ…..ခုပဲပြောတယ်ကြည့်….ကိုသန်းထွဋ်ဦးက ဦးပေဆီက ဘီယာ ကပ်သောက်မလို့တဲ့…မန္တလေးမှာ မိုးကရွာတယ်မကြားသေးဘူး။မိုးမရွာလို့ ပူတာရော ကပ်သောက်မှာစိုးလို့ ပူတာရော….မီးအချိန်ပြည့်မလာသေးလို့ပူတာရော….ပြီးတော့ ပူတာရော.. ပူတာရော…ဦးပေကနေ …ဦးပူဖြစ်သွားပါမယ့်ဗျာ မလုပ်ပါနဲ့ ကိုသန်းထွဋ်ဦး…
အဲဒီ လွန်ဆွဲတာနဲ့ ပါတ်သပ်ပြီး သစ်ထူးလွင်မှာ ဖတ်ခဲ့ရတယ်
ရောက်ရာ အရပ်မှာ ကိုယ့်နားနီးစပ်သူတွေကို အယူလွဲ အတွေးလွဲ
ဆောက်တလွဲ တွေ နဲ့ပါတ်သပ်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို ရှင်းပြခဲ့ဖူး
သို့ သော်လည်း အားလုံးရဲ့ တူညီသော မျက်လုံးများကို ဖတ်ခဲ့ရတယ်
ကျုပ်ကို မေးကြတယ် …. Buddha ဘာသာမှ ဟုတ်ရဲ့ လားတဲ့…….
နွားကို ပလာတာ ကျွေးတာကမှ လွယ်ကူလိမ့်မယ်
ကျုပ် က မွေးဖွားလာမည့် မျိုးဆက်သစ်ကပဲ စမှ ရတော့မယ်
စောင့်ကြပါစို့နောင် အနှစ် ၃၀
ဒါနဲ့ …ကြုံလို့ပြောပြရမယ် ….
အဲသလို အတွေးမှား အယူမှား လုပ်ရပ်တွေကို ရိုက်သွင်းနေကြတာ
အနန္တော အနန္တ ဂိုဏ်းဝင်တွေ ဆိုတဲ့ မိဘ က အစပြုလို့ဆရာသမား ၊ ဘုန်းကြီး အပါအ၀င်
ရပ်မိရပ်ဖ ဆိုတဲ့ ဖြုတ်ဦးဏှောက်နဲ့လူစားထမင်းကို စားတဲ့ အမာခံ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဗ် တွေနော်
မြင်တဲ့ ပွိုင့်ကို သဘောကျလို့ထောင်လို့ ရသမျှ အကုန်ထောင်ပြီး အားပေးသွားပါတယ်
လဆန်းကိုးရက်နေ့ရွာတဲ့ မိုးမို့ ၇ရက်တိတိရွာမယ်ဆိုပီး
မိုးရွာအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာတော့
ကြားဖူးတဲ့ သတင်းတစ်ခု .. ကြာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ ..
မိုးအတု ဖန်တီးပြီး ရွာအောင် ဖန်တီးတယ်ဆိုပဲ ..
အဲဒါမျိုး ပေါ်လာရင်တော့ မဆိုးဘူးလားပဲ …
ကျုပ်ကတော့ မိုးရွာစေချင်ရင် ဘာမှ လုပ်မနေဘူး ..
သဗ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ အခေါက် ၁၀၀၀ ရွတ်၊ မိုးပေါ် လက်ညှိုးထိုးပြီး ..
စိတ်ထဲကနေ မိုးရွာစေလို့ … ပြောချလိုက်တာပဲ …
အားပေးတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အထူးကျေးဇူးတင်ပြီး….အမြင်တူ…ခံစားမှု တူတာလေးတွေ တွေ့ရလို့ အားတက်မိပါတယ်။
“သစ်ပင်ကို တော်တော် ခုတ်ပ…
သဲပင်လယ် ဖြစ်လိမ့်မလွဲ…. ဆရာဇော်ဂျီမှတ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ…
ကိုကြီးအံက မိုးတုပါတဲ့။ထိုင်းဘုရင်ကြီးဆီကနေ ဝယ်ရမယ်ဗျ။နည်းပညာပေါ့လေ။
အမှတ်မမှားရင်.. လွန်ခဲ့တဲ့..အနှစ်၂၀ကျော်က.. အမေရိကဦးဆောင်ပြီး.. မုန်တိုင်းနဲ့.မိုးကို..လူလုပ်..လူထိန်းချုပ်မှုအောက်ထားဖို့.. ကြိုးစားဖူးတယ်..
အဲဒီဂေဟကို.. ထိလိုက်ရင်.. အကုန်.. ဟန်ချက်ပျက်ကုန်မယ်ဆိုပါတယ်..
ရန်ကုန်က..ကန်တော်မင်ပန်းခြံထဲ.. ရွာသူား၂ယောက် ကြည်နှုးရင်း.. ရီလိုက်လို့.. ဘေးက လိပ်ပြာအတောင်ခတ်လိုက်ရင်.. နယူယောက်မှာနှင်းကျပြီး ကိုကြောင်ကြီး.. နှင်းတောထဲခြေချော်ကျနိုင်တာပါ..။
Philip Merilees concocted Does the flap ofabutterfly’s wings in Brazil set offatornado in Texas? asatitle. Althoughabutterfly flapping its wings has remained constant in the expression of this concept, the location of the butterfly, the consequences, and the location of the consequences have varied widely.
The phrase refers to the idea thatabutterfly’s wings might create tiny changes in the atmosphere that may ultimately alter the path ofatornado or delay, accelerate or even prevent the occurrence ofatornado in another location. The flapping wing representsasmall change in the initial condition of the system, which causesachain of events leading to large-scale alterations of events (compare: domino effect). Had the butterfly not flapped its wings, the trajectory of the system might have been vastly different.
Note that the butterfly does not cause the tornado. The flap of the wings isapart of the initial conditions; one set of conditions leads toatornado while the other set of conditions doesn’t. It’s possible that the set of conditions without the butterfly flapping its wings is the set that leads toatornado.
ကျုပ်က.. မိခင်သဘာဝတရားကို.. God လို့ထင်တယ်..
သေချာတာကတော့ လွန်ဆွဲတိုင်း မိုးမရွာပါဘူး…